के हत्केला चिलाउँदा पैसा आउँछ ? होइन, बरु हुन सक्छ यस्तो रोग – Taja Khawar
के हत्केला चिलाउँदा पैसा आउँछ ? होइन, बरु हुन सक्छ यस्तो रोग
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १२, २०७८ समय: ११:४२:०४
October 17, 2020 1307
केही मानिसहरु हत्केला चिला’उँदा पैसा आउने तथा गुम्ने विश्वास गर्छन् । तर त्यसो कदापि होइन, यसो हुनु कुनै रोग भएको हुन/सक्ने संकेत हो ।हत्केला चिलाउनु रोग नभए पनि विभिन्न तत्वह’को परिणाम हो वा रोगको संकेत हो।
छालाको कोषहरु तीब्र बृद्धि भएमा र छाला’को सतहमा जम्मा भए पनि हत्केला चिलाउँछ। कहिल्य’काहिँ आफै छाला कन्या’उँदा पनि यस्तो समस्या उत्पन्न हुन्छ।
विशेष गरी बालबालिका र बृद्धबृद्धा यस्तो संक्रमण&बाट प्रभावित हुन्छन्। मधुमेह र छालाको सम_स्या पनि हत्केला चि’लाउने चिकित्सकहरु बताउँछन् । तसर्थ अत्यधिक हत्केला चिलाउनु मधुमेहको पनि संकेत हो।
खानेकुराको एलर्जी – खानेकुराको ए’लर्जीले पनि हत्के:ला चिलाउँछ। कसैकसैलाई कुनै खानाले एलर्जी गरिहाल्छ र त्यसको असर हत्के’लामा देखिन्छ। अन्डा, बदाम, दूध र समुद्री खानेकुराले पनि कसैकसैलाई एलर्जी बनाउँछ। यी खाना खानेबित्तिकै कोही-कोहीलाई एलर्जी भइहाल्छ।
कार्पल टनेल सिन्ड्रोम – नाडीको हड्डीको नसारुमा भएको चोट’पछि हात र औलामा हुने पीडाले पनि हत्केला चिलाउँछ। शरिरमा मध्यम खालको नसा दबिएमा कार्पेल टनेल सिन्ड्रोम हुन्छ।
अध्य’धिक लेख्दा, टाइप गर्दा तथा हात र औलाहरुको बढी प्रयोग हुँदा यस्तो अवस्था आउँछ। असन्तु’लित त’रिकाले हत्केला चिला’उनु कार्पल टनेल सिन्ड्रोमको संकेत हो।
औषधी वा शल्यक्तियाको तरिकाले पनि यो सिन्ड्रो’मको उपचार गर्न सकि’न्छ। एस्पिरिन, आई’बुप्रोफिन, कोर्टिकोस्टेरोइड्सले नसाको दबाबलाई शान्त पारी हत्केला चिलाउन रोक्छ। नशा_लाई दबाब दिने तन्तुलाई शल्यक्रिया गरेर पनि चिलाउने स’मस्या रोक्न सकिन्छ।
छालाको समस्या – मुख्यगरी हत्केला चि’लाउनु भनेको छाला’को समस्या हो । छालास’मबन्धि यो रोग ला’ग्दा औलाहमा प्रभाव पार्छ। गर्मी र जाँडो मौसममा यसले प्रभाव पार्छ।
प्राइमेरी बिलियरी सिरोसिस – कले’जोसँग सम्बन्धित समस्या’ले पनि हत्केला चिला’उन सक्छ। कलेजोमा गम्भीर समस्या नआउँदै हत्केला र खुट्टाको पैतला चिलाउँछ।
चि’लाउने समय र अवस्था फरक फर’क हुन्छ। कहिले अकस्मात हुन्छ भने कहिले दिन वा रात’मा मात्र चिलाउँछ। रगत प्रवाह गर्ने प्रणालीमा र विशेष गरी लिभर’मा एसिड उत्पन्न (बाइल एसिड) हुँदा हात हत्केला चिलाउँछ। हात चिलाउने स’मस्या रोक्न एन्टिहिस्टा’माइन दिइन्छ।
हातको राम्रो सरसफाई र विभिन्न प्रकार’का लोसन र क्रिमले हत्केला चिल्लो पार्दा धेरै हद’सम्म चिलाउने समस्याको समाधान हुन्छ।
छाला’लाई कहिल्यै पनि सुख्खा नराख्ने। चिला’यो भन्दै बेस्सरी रगेडेर कन्याउनु हुँदैन्। समस्या गम्भी:र भयो भने तत्काल चिकित्स:कको सल्लाहमा औषधी प्रयोग गर्नुपर्छ।
हत्केला चिलाउने समस्या:बाट निको पाउन सबैभन्दा पहिला त हात चिलाउनुको कार:ण बुझ्नुपर्छ। हत्केला चिलाउ’नुका विभिन्न कारण हुन्छन्। जाडो याममा हुने सुख्खा छाला वा बेस्सरी हात घोटेर धुदा पनि चिलाउने भएकोले ढुंगा वा जालीले हत्के’ला रगेड्नु हुँदैन। – खबर हब
Last Updated on: July 27th, 2021 at 11:42 am